Pet Paw Nail Clipeer mpanamboatra sy mpamatsy | China Pet Paw Nail Clipeer Factory
Pet Nail File dia milamina soa aman-tsara ary manatratra fantsika vita malefaka miaraka amin'ny sisin'ny Diamond. Ny kristaly kely tafiditra ao anaty nikela dia mametraka haingana ny hohoan'ny biby. Ny fandriana fantsika fantsika biby dia ampiasaina mba hifanaraka amin'ny fantsika.
Ny rakitra fantsika biby dia manana tahony ahazoana aina ary tsy voafehy.
Clip Claw Nail Clipper
1. Ny volo matevina an'ity clip claw nail claw ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, izy io dia matanjaka ampy handefasana ny hohoan'ny saka anao amin'ny fanapahana iray monja.
2. Ilay mpihetsiketsika hoho saka dia manana hidy fiarovana izay mahatonga anao hisoroka ny loza mety hitranga tsy nahy.
3. Ilay clipper hohohoho saka dia misy fiakan-tsoroka ahazoana aina, mora, tsy mitosaka ary ergonomika izay mijanona am-pilaminana eo am-pelatananao.
4. Ny clipper fantsika saka maivana sy mora entina dia natao ho an'ny biby kely. Ary azo entina mora foana amin'izay alehanao.
Pet Nail File dia milamina soa aman-tsara ary manatratra fantsika vita malefaka miaraka amin'ny sisin'ny Diamond. Ny kristaly kely tafiditra ao anaty nikela dia mametraka rakitra haingana'sifotra. Ny fandriana fantsika ho an'ny biby fiompy dia namboarina mba hifanaraka amin'ny hoho.
Karakarao hoho saka vy tsy misy vy
Ny lelam-pandrefesana ampiasaina hanamboarana ny clipper hoho saka dia vita amin'ny vy tsy matanjaka mba hahazoana antoka fa maharitra sy azo ampiasaina izy ireo mandritra ny taona maro.
Nasiana fehikibo vita amin'ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny vy ny kofehy vy tsy misy solafaka rehefa manety.
Na dia ny mpampakatra matihanina aza dia tadiavin'ny mpikarakara matihanina ho an'ny alika sy saka saka isan'andro. Ampiasao ity trimmer hoho saka vy tsy misy fangarony ity mba hitandrina ny hohoan'ny biby fiompinao.
Clipper Nail kely
Ny mpikapa fantsika maivana dia natao hampiasaina amin'ny biby kely, toy ny alika kely, saka ary bitro.
Ny lelan-tsipika kely vita amin'ny fantsika saka dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony ka hypoallergenic sy mateza.
Ny tantana kely vita amin'ny fantsika saka dia vita amin'ny paosin-taratasy, mamela anao hikiry tsara sy milamina izy ireo mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana.
Gunting fantsika matihanina
Ny hety hoho saka matihanina dia namboarina tamin'ny fomba ara-dalàna tamin'ny vy maranitra maranitra somary boribory. Ho afaka hahita ny zavatra ataonao ianao ary hanampy anao hamantatra hoe ohatrinona no ilainao, misoroka ny fikorontanan-drà na tsy misy sensor haingana aza.
Ny scissor hoho saka matihanina dia manasaka tànana ahazoana aina sy tsy mihetsiketsika. Izy io dia miantoka ny fahamoran'ny fampiasana sy fisorohana ny kibay sy ny fahatapahana tsy nahy.
Ny fampiasana an'io gunting hoho saka matihanina io ary manety ny hombo, ny hoho, dia azo antoka sy matihanina izy io.